လူသေအလောင်းများ ပျက်စီးမှု သန်လျင်တွင် ဖြစ်ပွားနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လူသေအလောင်းများ ပျက်စီးမှု သန်လျင်တွင် ဖြစ်ပွားနေ
Posted by parparazi on Apr 9, 2010 in Myanma News, News | 13 comments
ကြွက်တွေတောင် ငတ် နေပြီနော် ချုပ် ချုပ်ကြီးတို့ ရေ ကြည် လဲ့ လုပ်ပါ ဦး၊၊၊၊၊၊၊၊
ကြွက်တွေက လူသားစားတယ်လား။ အဲဒါဆိုကြောက်စရာကြီးနော်။ ပုလိပ်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်လား။ ကြက်တုပ်ကွေး ၀က်တုပ်ကွေးတွေ ပြီးတော့ လာပြန်ပြီ ကြွက်။
အခု.. အဲ့ဒီတရားခံ ဖမ်းမိသွားပီလားဟင်
ရောဂါဆိုးတွေ မ၀င်ခင် ကြိုတင်တားရမယ်
လူသားကို အဘွားအို က ဘာလို့စားရတာလည်း မသိဘူးနော်။
တော် တော် ကြောက် စရာ ကောင်း တဲ. ကြွက်တွေ ပဲ
အဲဒီမှာ တံခါး မရှိ ဘူးလား?
တခြားသတင်းမှာ မပါတဲ့ ကိစ္စတွေများ ရှိမလား သိပ်တော့ မသင်္ကာဘူး တခုခု လိုအပ်ချက်ရှိနေသလိုဘဲ ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး
I knowalittle about this case . This is not concerned with rats . But I don’t know the facts .
သူတို့ စားတဲ့ အလောင်းတွေက ရောဂါပိုးတွေ
ကြွက်ကြီးတွေက ကြောင်လောက်ရှိတယ်နော် . . . ည ဘက်ဘယ်လမ်းမပေါ်မှာလည်း မသိဘူး ကြွက် ကလိုက်လို့ ကြောင်က ထွက်ပြေးနေတာတွေ့ဖူးတယ် . ..